K: လူလား မြောက် ခြင်း
တွေ့ ကြုံ ဆုံ ကွဲ တဲ့..
တရားစကားရှိပေမယ့် ဘယ်တော့မှလည်း တရားမရပါဘူး..
အဲ့ဒီစကားက ဒီညတော့ ကျနော့ကို ခြိမ်းခြောက်တော့မယ်နဲ့တူတယ်..
ပိုစ်တော့ဆုံးသွားပါရဲ့ လူတော့မောပြီး ကျန်ခဲ့တယ်ဗျာ....
တနေရာမှာ ဝေးကုန်ကြတာ သေချာတယ်။
I am gonna be 31 on 15 June. I am still young to be mature/grow up with my age...compare with all of my friends's life. As you mention I am still .........
I feel as Mote Thone said.... felt tired with too many thoughts.........
ခံနိုင်ရည် ရှိရှိ မရှိရှိ ခံကြရတာ။
အသက်အရွယ်အားဖြင့်တော့ တနေ့တခြား ကြီးထွားလာကြ။
တကယ်ရော ရင့်ကျက်လာသလားကတော့ စဉ်းစားစရာ။
လူ့ဘ၀ ရဲ့ အနှစ်သာရက ဘာလဲ....ခဏလောက် ရပ်တန့် တွေးတောစရာ။
ကေ... တယောက်နဲ့တယောက် တန်ဖိုးထားမှုချင်း ကွာခြားကြသလို ဘ၀တွေ ကွာဝေးသွားမှာပါပဲလေ....
ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်ကျေနပ်ရင် ပြီးတာပဲ..
သူငယ်ချင်းကို ပြောဖြစ်တဲ့ စကားတွေပါ...
လုပ်သင့်တာတွေထက် လုပ်ချင်တာတွေကိုလုပ်နေတတ်ပြီး လူလားမမြောက်သေး တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ချီးယားစ်...
မကေရဲ့သူငယ်ချင်းအကြောင်းဖတ်ရမှပဲ ကိုယ်မိဖကို ကိုယ်ဘာမှထိထိရောက်ရောက်မ
လုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့၊ ကိုယ်တိုင်လည်းလူလားမမြောက်သေးတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြင်ရ
တယ်။ ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် မကေရေးတာ။